Fanaad Caan ka ah Caalamka oo Xalay daawatay kulankii Portugal iyo Switzerland? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Fanaad Caan ka ah Caalamka oo Xalay daawatay kulankii Portugal iyo Switzerland?
(11-10-2017) Kulankii Xalay dhex maray dalalka qaarada yurub kawada tirsan ee Portugal iyo Switzerland ayaa waxaa dadkii daawaday ee kusugnaa Garoonkii lagu Cayaarayey ka mid ahaa Fananada Caanka ah ee Madonna iyada oo Taageere u ahayd mid ka mid ah daallkii Cayaaraayey.
Madonna oo ah Fananad Caan ka ah Caalamka isla markaana aad loo jecelyahay heesaheeda ayaa Taageere u ahayd dalka Portugal si uu ugu soo baxo Koobka aduunka 2018 siweyn ayeyna ugu dabaal degtay guusha ay gaareen.
Fanaanada Madonna ayaa in badan ku soo laa laabatay dalka Portugal halkaa oo wiilkeeda 11 Sano jirka ah uu ka barto kubada cagta isaga oo ka tirsan Naadiga Benfica ee dalka Portugalo sidaa daraadeed ayey Taageere ugu ahayd dalka Portugal kulankii ay xalay 2-0 ku Garaaceen Switzerland oo ay u direen in uu dheelo laba kulan oo bug bax ah.